Ny motera famandrihana tsara indrindra amin'ny tranokala fanofana anao
Masinina famandrihana azo ampidirina mora foana miaraka amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo mba hahazoana antoka fa mety hanana traikefa fitadiavana milamina ireo vahiny mety ho tonga. Ity fampisehoana mahavariana ity dia eto mba hampisondrotana ny fiovam-ponao ary hitondra any amin'ny sehatra manaraka ny fitantanana ny fanananao.
Satria ny tranokalan'ny lisitra an-tserasera sy ny kaomisionan'ny OTA dia mety hahatratra 20%, izay mazàna mitovy amin'ny 50% amin'ny karaman'ny mpitantana ny hofan-trano fialan-tsasatra, dia lafo tokoa ny famandrihana voaray avy amin'ireo fantsona ireo. Amin'ny maha tompona orinasa manofa trano fotoana fohy anao, mazava ho azy, maniry ny hampitombo ny tombom-barotrao ianao amin'ny fampihenana ny vola aloa amin'ny kaomisiona. Na izany aza tsy mora izany satria mila manana fitaovana sasany ianao vao afaka manao izany!
Na dia nanangana tranokala handraisana famandrihana mivantana aza ireo mpamatsy servisy servisy dia tsy nahomby firy, satria ny tranonkalany dia tsy manana taham-pahafaham-po sy fahafaha-miaina ary mifototra amin'ny famotopotorana. Mandritra izany fotoana izany dia manantena ny traikefa mitovy amin'ny tranokalan'ny mpampiantrano ireo vahiny efa zatra namandrika toerana eo noho eo.
Mpanome rindrambaiko maro izay manome anao ny sanda mivantana sy ny fahafaha-mampiasa ny famandrihana maotera tsy manana fiasa fototra sasany. Ny motera famandrihana sasany dia manana endrika izay toa mijanona amin'ny taonjato lasa. Ny hafa tsy mahazaka fananana singa marobe. Ny ankamaroan'ireo motera famandrihana ireo dia tsy afaka mamela ny mpitsidika hikaroka afovoany amin'ny fananan'ny mpampiantrano fialan-tsasatra mety manana fananana manerana ny tanàna mihoatra ny iray. Ary toa tsy afaka mahita mpamatsy iray mamela ny fanarahana tsara amin'ny alàlan'ny Google Analytics na Google Tag Manager, fitaovana roa ilaina amin'ny orinasa tsirairay.
Ahoana no ahafahan'ny motera mpamandrika an'i Zeevou manampy?
Ao amin'ny Zeevou, azonay ny maha-zava-dehibe ny famandrihana mivantana, ary ny tanjonay dia ny hitondra Ny revolisiona famandrihana mivantana! Araka izany, manolo-tena izahay hanome anao fitaovana tsotra indrindra afaka manao asa lehibe eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny. Ohatra, ny fananganana fitaovana ahafahan'ny tompona fandraisam-bahiny manana habe rehetra hampitombo ny haben'ny famandrihana azony raha tsy mila mpanelanelana mandray karama izy ireo. Ny motera famandrihantsika dia porofon'izany fanoloran-tena izany.
Ny motera famandrihantsika dia misarika ny tahan'ny vidiny sy ny fahazoana azy, na amin'ireo niditra an-tanana na nalefa taminay tamin'ny alàlan'ny iray amin'ireo vidiny mavitrika mpiara-miombon'antoka fampidirana. Fanampin'izay, manana vaovao tsara izahay ho an'ireo mpampiantrano izay miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena; ny motera famandrihantsika aza dia manohana ny fametrahana vola marobe! Noho izany, tsy ilaina ny manahy momba ny fiatrehana vola samihafa.
Zeevou Partners dia afaka manangana hametraka-ons hivarotra vokatra na serivisy fanampiny ary aforeto ireo ho ampahany amin'ny drafitra tahan'ny. Ny mpampiantrano dia afaka misafidy ny hanery ny drafitra tahan'ny ho an'ny motera famandrihana fotsiny, mba hanomezana fifanarahana manokana raha ampitahaina amin'ny fanolorany ny OTA. Zeevou mamela anao hametraka fisondrotana, ary mpiara-miasa kaody voucher hampiasaina amin'ny alàlan'ny motera famandrihana maimaim-poana.
Betsaka kokoa ny endri-tsarin'ny motera Zeevou. Azonao atao ny mampifangaro ny motera famandrihana mivantana aminay Google Analytics mba hanarahana ny fifamoivoizana sy ny demografika. Afaka manampy amin'ny fahatakarana tsara kokoa izany of ny mety ho mpanjifanao. Ankoatra izany, ny fampidirana antsika amin'ny Google Tag Manager mamela ireo mpampiantrano hampiasa ny motera famandrihana Zeevou hanarahana ny fizotran'ny tranokala sy ny famandrihana azony. Ilaina manokana io rehefa manandrana mamerina ny vola ampiasanao amin'ny PPC-Pay Per Click- Fanentanana Google Ad.
Ny fametrahana famandrihana dia mahitsy tanteraka. Ny hany ataon'ny mpitsidika dia ny manampy ny anarany voalohany, ny anarany farany ary ny adiresy mailaka. Raha irinao, azonao atao koa ny mangataka azy ireo handefa ny nomeraon-telefaon'izy ireo hahafahany mametraka famandrihana. Ny fanamafisana ny fampahalalana nangatahina tamina vahiny raha nametraka famandrihana dia manome antoka fa afaka misambotra ny angon-drakitra vahinin'olona maro azo atao ianao. Zeevou ny Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana manome ny vahiny ny fahatsapana fa namandrika nefa tsy misy olana ary koa ny fikarakarana ny fanangonana ny faneken'ny varotra mifanaraka amin'ny GDPR, ny fandoavam-bola, ny fiarovana ary ny fanamarinana ID.
Ho an'ireo izay tsy maniry hampiasa ny maimaim-poana sy ny feno tranokala famandrihana mivantana natolotr'i Zeevou, ny motera famandrihantsika dia afaka ampidirina amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo. Ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola a WordPress Widget, ary koa iFrame izay azo ampidirina ao amin'ny ankamaroan'ny tranonkala, anisan'izany ireo nomen'i Wix. Izy io dia mamindra ny vahiny amin'ny famandrihana Zeevou maotera ary mamela ny vahiny hametraka famandrihana amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Ny fizotran'ny fampiroboroboana ny orinasanao amin'ny fampiasana ny milina famandrihana an'i Zeevou dia tsy misy fanaintainana. ny mangataka demo maimaimpoana, hahita ny fotoana hitrandrahana hafa ianao Toetoetra izany Zeevou dia manolotra sy manampy ny orinasanao hahita ny toerany eo amin'ity tsena mifaninana ity. Aza adino fa ny antsika ekipa fanohanana eto hanampy anao raha manana fanontaniana ianao.